Nebula dia nanao sonia fifanarahana serivisy izay mitentina 100 tapitrisa RMB ho an'ny laboratoara fitiliana bateria herinaratra miaraka amin'ny CATL
Nebula Testing dia sampana mitazona ny Fujian Nebula Electronics Co., Ltd. izay manana toeram-pitsapana fanandramana antoko fahatelo lehibe indrindra sy tsara indrindra any Shina ho an'ny modules bateria herinaratra sy ny fitiliana ny fahombiazan'ny rafitra. Nebula Testing dia mikendry ny hamahana ny olana iraisana amin'ny syst bateria maro ...
Nebulas dia voatanisa tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Stock Stock of Shenzhen
Tamin'ny 25 aprily 2017, ny Fujian Nebula Electronics Co., Ltd. dia nanao lanonana lisitra tao amin'ny Stock Stock of Shenzhen ary niantsona tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Growth Enterprise Market (fanafohezana ny tahiry: fizarana Nebula, kaody stock: 300648) izay manondro fa niditra tao amin'ny vaovao i Nebula. vanim-potoanan'ny ...
Nebulas dia namolavola rafitra fitsapana fonosana bateria herinaratra vaovao misy simulateur amin'ny toe-javatra iasana. Ny KPI an'ny rafitra toy izany dia anisan'ny tsara indrindra amin'ny mpifaninana tsena hafa manerantany.
Nebula dia namolavola rafitra fitsapana bateria herinaratra vaovao NE400 izay misy ny simulateur amin'ny toe-javatra iasana izay ny 3ms amin'ny fotoana valiny ankehitriny dia haingana toy ny 3ms sy ny fotoana famindrana / famoahana 6 ms. Ny vokatra KPI hafa dia anisan'ny tsara indrindra manohitra ny tsena hafa ...
Nebula dia namolavola ny rafitra fitsapana voalohany an'i Shina ho an'ny fiarovana ny kitapo bateria lithium bateria.
Nebula dia nomena voalohany ny baiko avy amin'ny Taiwan SMP Company ho an'ny rafitra fitsapana ny kitapo fiarovana ny kitapo bateria lithium. Noho ny toeran'ny tsenan'ny SMP eo amin'ny indostrian'ny bateria solosaina, ny rafitra fitsapana toy izany dia nahasarika ny sain'ny tsena izay ...
Fitsapana famoahana bateria, Fitaovana fitsapana bateria, 18650 Tester, Fitaovana fitsapana mandeha ho azy bateria, Testeran'ny fahafahan'ny famoahana bateria, Tester mamoaka fahaizan'ny bateria 48v,